ကျန်းမာရေး (A-Z) | Page 10 | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အရက်သောက်ခြင်းကြောင့် အသည်းခြောက်ခြင်း (Alcoholic Liver Cirrhosis)
13.8.2016 | ကျန်းမာရေး (A-Z)
အသည်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း၊ အသားဓာတ်များကို ဖြိုခွဲပေးခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်မှ အဆီဓာတ်တွေကို စုပ်ယူနိုင်ရန်...
ကျောရိုးမကြီးတီဘီ (Spinal Tuberculosis)
7.8.2016 | ကျန်းမာရေး (A-Z)
တီဘီရောဂါသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်အဖြစ်များသော ကူးစက်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကျောရိုးမကြီး တီဘီရောဂါသည် အရိုးတီဘီရောဂါအမျိုးအစားတွင်ပါဝင်...
4.8.2016 | ကျန်းမာရေး (A-Z)
နှလုံးကြီးတာဟာ ရောဂါတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ရောဂါတစ်ခုရှိနေကြောင်း ဖော်ပြနေတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးကြီးခြင်းကို ရင်ဘတ်ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြ...
ဓာတ်မှန် (X-ray) ဆိုတာ ဘာလဲ?
1.8.2016 | ကျန်းမာရေး (A-Z)
ဓာတ်မှန်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ပုံရိပ်တွေကို ဖမ်းယူရာမှာမြန်ဆန်ပြီး နာကျင်မှုမရှိတာကြောင့် အသုံးများတဲ့ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။...
G6PD ချို့တဲ့ခြင်း (G6PD Deficiency)
27.7.2016 | ကျန်းမာရေး (A-Z)
G6PD လို့ အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ Glucose6Phosphate Dehydrogenase (G6PD) ဟာ သွေးနီဥတွေအလုပ် ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်အောင်ကူညီနေတဲ့ အင်ဇိုင်းတစ်မျ...
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ (Dengue Fever)
24.7.2016 | ကျန်းမာရေး (A-Z)
♦ ဘာကြောင့်သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ရလဲ ?
လူတွေမျိုးရိုးကွဲသလိုပဲ ခြင်မျိုးစိတ်ကွဲတွေရှိတဲ့အနက်က အေအီးဒီးစ်အီဂျစ်ပ်တိုင်း (Aedes A...
အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုး
21.7.2016 | ကျန်းမာရေး (A-Z)
အသည်းရောင်အသားဝါ B ရောဂါသည် Hepatitis B Virus (HBV) ကြောင့်ဖြစ်သည့် ကူးစက်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးအနေဖြင့် အသည်းပျက်စီးခြင်း၊...
16.7.2016 | ကျန်းမာရေး (A-Z)
အိပ်မပျော်သည့်််််််ရောဂါ (Insomnia) သည် အိပ်ရန်အချိန်နှင့်အခွင့်အရေးရသည့်တိုင် အိပ်ပျော်ဖို့ခက်ခဲခြင်း (သို့) ကြာရှည်မအိပ်နိုင်ခြင်း (သို့...